DJ Video Loop - Smashing Record - NYE Countdown yeJs, Vjs, Nightclubs 2019
musha / Specials Products / DJ Video Loop – Smashing Record
Usagadzirisa chitubu chetsvuku panguva yako yakagadzirirwa! Kunyange kana iwe usina vhidhiyo yerimwe rwiyo, iwe unogona kunge uine zviratidzo zvinotyisa kuti urambe uchienda. Zvichiri nani, ita kuti iite imwe ye DJ yedu video yekutengesa, yakagadzirwa nezita rako. Simbisa chitarisiko chako pachako uye usaita kuti vanhu vafunge kuti yako yakagadzirirwa yakapera nokuti skrini iripo.
Matereji emimhanzi nemibhedha yemimhanzi zvinowanikwa nevhidhiyo iyi, taura nesu nezvemashoko.
SKU: SMLoop Category: Specials Products
Vhidhiyo Dj - zita rakagadzirirwa uye logo rinosvika kutamba paVJ yako mavara kana iwe usina vhidhiyo yenziyo yauri kutamba. Tora chikwata chako nguva dzose nekupfuura uye kupfuura pane kuva nekkuta. Zvose zvinoshandiswa. Kwete audio. (asi mutinzwi izwi / mimhanzi mubhedha rinogona kuwedzerwa kana zvichidikanwa) Kuzvikoro djs, nightclub, mahoteli, mahotera uye makasinos chete.
Kubva kuvakadzi veNYECOUNTDOWN.com neKILLERSPOTS.com.